> Household wear>OPEN GLASS DOOR WARDROBE-HIGH
Full height2open glass door wardrobe with 1 hanging rod and 1 shelf. (including base) နှစ်ဖက်ဖွင့်မှန်တံခါး (၂)ချပ်နှင့် အ၀တ်အစားဗီရိုအမြင့်ဖြစ်သည်။ အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ (အောက်ခြေစင်ပါဝင်သည်။) Size: W120*D58.5*H200 cm. အတိုင်းအတာ – အလျား ၁၂၀၊ အနံ ၅၈.၅၊ အမြင့် ၂၀၀ စင်တီမီတာ2options available in same price (ground glass or mirror glass) ဈေးနှုန်းတစ်မျိုးတည်းဖြင့် အမျိုးအစား (၂)ခုအား ရွေးချယ်နိုင်သည်။ (မှန်အနောက်တံခါးနှင့် ကြည့်မှန်တံခါး)။ Including strong cloth rod and 1 removable shelf. ခိုင်ခံ့သော အ၀တ်ချိတ်တန်း (၁)ခုနှင့် စင် (၁)စင်ပါဝင်သည်။ High legs designed for save space and easy to clean. နေရာစားသက်သာစေရန်နှင့် လွယ်ကူစွာသန့်ရှင်းနိုင်ရန်အတွက် ခြေတံအမြင့်အား ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။